NBA 2K17 durba waa nala dhex joogaa, iyo barnaamijkeeda rasmiga ah sidoo kale | Wararka IPhone
NBA 2K17 mar hore baa dhexdeenna ah, iyo barnaamijkeeda rasmiga ah sidoo kale
Sida sanad walba, taageerayaasha cayaaraha baastada waxay sugaan sida biyaha May bixitaanka NBA 2K17, muran la'aan waa jilista kubbadda koleyga ugu fiican sanado badan. Dabcan qaybinta cusub ee 2K waxay la socotaa barnaamij si aad looga faa'iideysto, waana waqtigii la fiirin lahaa.
1 Isla fikrad
2 VCs qof walba
Abku wuxuu raacayaa aasaaska aasaasiga ah qoraalkii hore, sidaa darteed waan sii wadaynaa inaan haysanno codsi leh naqshad gebi ahaanba shaqsiyan ah iyo wax qabad badan ama kayar oo laga doodi karo, laakiin in dhamaadka maalinta la raaco sharraxaadda ciyaarta oo loo hoggaansamo waxay na siiso.
Sannadkan waxaan haysannaa laba aag oo kala duwan inta udhaxeysa NBA 2K17 iyo qeybta MyTeam Mobile, adoo dooranaya labada mid aan dooneyno inaan ku shaqeyno. Kuwa naga mid ah ee aan dooneynin inay wax ka ogaadaan ikhtiyaarka labaad, waa wax yar oo dhib ah oo aan lagu dejin karin qaab ahaan kaliya NBA 2K17, in kasta oo ay noqon karto wax ay ku saxi doonaan cusbooneysiinta mustaqbalka ee barnaamijka.
Shaqada ugu cusub sanadkan waa «Scan your face», oo aan ku qaadi doono wajigayaga in MyPlayer ee ciyaarta. Nidaamku si aad ah ayuu ula shaqeeyaa kamarada gadaal, iyo si fiican kamarada hore ilaa inta ay tahay iPhone 6s ama 7. Aad ayey muhiim u tahay in mobiilku gebi ahaanba la joojiyo inta aan howsha wadno, haddii kale waxaan heli doonaa dhibco yar natiijada ugu dambeysa ma noqon doonto mid midab leh.
VCs qof walba
Malaha isticmaalka ugu weyn ee NBA 2K17 ciyaartoy ay siiyaan barnaamijka waa hel qadaadiicda VCs. Sannadkan waxaan ku guuleysan karnaa iyada oo la siinayo kaarka caadiga ah ee kaararka oo ku kooban 24 saacadood, iyo sidoo kale ciyaaro deg deg ah oo ka dhan ah kuwa ka soo horjeeda taas oo aan ku guuleysan karno illaa 500 VCs maalin kasta. Adigu samir ahaan waad la soo bixi kartaa lacagta birta ah maalin kasta, laakiin halkaas waa inaad eegto haddii ay ku bixinayso waqtigaas.
Qeybaha kale ee barnaamijka ayaa ah kuwa soo jireen ah oo dib u eegis ku sameeya ciyaariyahankeena MyCareer, qaybta beerta nasashada (oo had iyo jeer sidan oo kale u socota) sannadkan waxaan sidoo kale ka arki karnaa iPhone-ka macluumaadka iyo tirakoobka kooxdeenna Pro-Am.
Marka la soo koobo, codsi lama huraan ah haddii aad tahay laacib NBA 2K17 ah, gaar ahaan haddii aad wax yar ka sii durugto marka ugu dambeysa ee aad ciyaarto dhowr ciyaarood. Barnaamijku ma fiicna, laakiin waan awoodnaa hel VCs maalin kasta oo xoogaa way ka fiican tahay sannadaha kale.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » NBA 2K17 mar hore baa dhexdeenna ah, iyo barnaamijkeeda rasmiga ah sidoo kale
Dukaanka App iyo iTunes ayaa la kulma cillad